Sweden oo gurmad caawinaad ah u direysa Geriiga - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
EU Waa in ay ku caawiso Geriiga xaaladda qaxooti ee uu wajahayo waddankas. Sidas waxaa aaminsan Ra'iisalwasaaraha Sweden Stefan Löfven. sawir: Lefteris Pitarakis/AP och Anders Ahlgren/TT
Sweden oo gurmad caawinaad ah u direysa Geriiga
La daabacay fredag 4 mars 2016 kl 12.21
Stefan Löfven ra'iisalwasaaraha Sweden ayaa ku dhawaaqay in Sweden u direyso teen-dhooyin iyo guryo yaryar oo kumeelgaar ah qaxootiga ku sugan dalka Geriiga.
Stefan Löfven waxuu arrinkan ku dhawaaqay mar uu maanta oo jimco ah la kulmey guddi hoosaadka baarlamaanka ku qaabilsan arrimaha EU.
Ra'iisalwasaaraha oo ka hadlayey xaaladda cakiran ee qaxooti ee ka taagan dalka Geriiga, waxuu sheegay haddii EU ku guuldareysato maareynta xaaladdaan in ay markas wax u dhimeyso oo qatar ku tahay wado-shaqeynta EU.
- Waxaa wajaheynaa musiibo banii-aadamnimo. EU waa in ay gacan ku siiso Geriiga maareynta culeyska saa'idka ah ee wadankas wajahayo, ka sakow in aan gacan ka dhiibano dadaalada banii-aadamnimo sidoo kale waxaan meesha ka maqneyn sidii loogu klao qeybin lahaa qaxootiga waddamada kale ee midowga Yurub, ayuu yeri Löfven.
Ra'iisalwasaaraha ayaa maalinta isniinta ah ka qayb-geli doona kulanweyne madaxda EU ku yeelan doonaa Bryssel. Maanta oo jimco ahna waxuu la kulmey guddi hoosaadka baarlamaanka ee qaabilsan arrimaha EU si ula sii tashado.